Mauritania: Booqashada taariikhiga ah ee Madaxweynaha Turkiya Erdogan – Kasmo Newspaper
Mauritania: Booqashada taariikhiga ah ee Madaxweynaha Turkiya Erdogan
Updated - March 1, 2018 7:19 pm GMT
London (Kasmo), Madaxweynaha Turkiya, Recep Tayyip Erdogan, ayaa booqasho rasmi ah ku tagay dalka Mauritania, taas oo qayb ka ah safarka Madaxweynaha ee Afrika oo soo bilowday 26kii Febraayo.
Wakaaladda Wrarka Turkiga, Anadolu, ayaa shaacisay in ay tahay booqashadii u horreysay oo Madaxweyne Turki ah ku tago Nouakcshott, halkaas oo Arbacadii 28kii Febraayo uu kula kulmay dhiggiia Maxamed Ould Abdel Aziz.
Labada dal waxay kala saxiixdeen tiro heshiisyo iskaashi ah sida kalluumaysiga, ganacsiga badaha, dalxiiska, beeraha iyo tamarta.
Ilaa doorashadisii, 28kii Agosto 2014, Erdogan socdaallo ku kala bixiyay qaaradda Afrika oo Turkigu hadda ku leeyahay 41 safaaradood, halka sannadkii 2009kii uu ku lahaa 12 qur ah.
Danaha Madaxweynaha ee qaaradda kuma koobna oo qur ah horumarinta xiriirka dhaqaalaha iyo siyaasadda ee waxaa ka mid ah xitaa sidii loo ciribtiri lahaa shabakadda FETO ee wadaadka Fethullah Gulen, ee loogu eedey Afgambigii dhicisoobay ee lagu sigay Erdogan 15kii July 2016kii.
Warar laga soo xigtay Wargayska ‘Al-Monitor’ ee arrimaha Bariga Dhexe falanqeeya ayaa sheegaya in Ururkaasi maamulo Dugsiyo badan oo ku yaalla Afrika oo qaar ka mid ahaa kuna yaallay Nouakcshott, 18 bilood ka hor Xukuumadda Turkigu xirtay.
Madaxweynuhu wuxuu kale oo booqan doonaa dalka Senegal maanta, Jimcahana dalka Mali, wuxuuna Isniintii 26kii Febraayo soo maray Algeria oo uu kula soo kulmay dhiggiisa Abdelazizi Bouteflika iyo R/Wasaaraha Ahmed Ouyahia.
Munaasibaddaas dhinacyadu waxay kala saxiixdeen heshiisyo kala duwan oo ku bsaabsan ganacsiga, dagaalka argagixisada, gaar ahaan Kooxda FETO ee Fethulla Gulen oo Ankara looga haysto argagixiso, kuna sugan Algeria.